Isitudiyo esiSitayile saseFinnieston/Iziko leSixeko sasimahla sokuPaka - I-Airbnb
Isitudiyo esiSitayile saseFinnieston/Iziko leSixeko sasimahla sokuPaka
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguKevin
I-Stylish Studio Flat, ibekwe kwindawo efanelekileyo yokuhlola iZiko leSixeko, iWest End kunye neFinnieston enepanorama yesixeko emangalisayo, ilungele iminyhadala e-Hydro & SEC, yimizuzu emi-5 kuphela yokuhamba.
Ifakwe eFinnieston nazo zonke iindawo zokutyela kunye neebhari ezinikezelwa apho, ndingavuya ukwenza iingcebiso ukuba ziyafuneka. IFlethi isanda kuhonjiswa kwaye ikwimeko entle. Ungalala ukuya kubantu aba-4.
Siyazingca kakhulu ngento esinikezela ngayo kwaye sinethemba lokuba singakubamba kungekudala
Iflethi yeStudio yanamhlanje ilungele isibini okanye abahlobo abambalwa ukuba bajonge iGlasgow. Iimbono zePanorama zeGlasgow.
Iflethi yethu inobutofotofo obumbalwa bekhaya obukuvumela ukuba uzive usekhaya njengenkqubo yesandi seSonos, umatshini weNespresso nguColonna, uDyson Hairdryer, uPhillips Hue Smart Lighting, iChromecast kunye neLarge Smart TV eneNetflix epheleleyo, iAmazon Prime kunye neTV ngoku. yakhelwe ngaphakathi.
Yonke ilinen yethu yebhedi nguJohn Lewis waseJiphutha weCotton yokucofa okuncinci kobunewunewu ngexesha lokuhlala kwakho.
Indawo yokupaka yasimahla kwindawo yokupaka iimoto ebekwe kumgangatho ophantsi wokwakha ukuze uyisebenzise ngexesha lokuhlala kwakho.
IFlethi ilungile ukuba uya kumsitho e-SEC okanye eHydro, zombini yimizuzu nje embalwa uhambe.
Konke ukucoca ngaphakathi kwepropathi kwenziwa nge-Ecover kunye neemveliso zeNdlela
47" HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-Chromecast, I-Disney+, I-Netflix, intambo yepremiyamu
4.96 · Izimvo eziyi-366
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi366
Imizuzu emi-5 ukuhamba ukuya eHydro & SEC. Ifakwe kwindawo edume kakhulu yaseFinnieston, uyonelwa iivenkile zekofu, iibhari kunye neeresityu. Mhlawumbi eyona ndawo ilungileyo esixekweni kwindawo zokutyela. Zininzi kakhulu ukuba zidweliswe, kodwa ndonwabile ukucebisa ezimbalwa. Ukuhamba umgama ukuya kwiZiko lesiXeko ngokwalo okanye uhambo olufutshane ukuya entliziyweni yeGlasgow's West End.
I'm a proud Glaswegian, I think it's a great place to live and I hope I can help you enjoy it as much as I do. I'll be on hand for all your questions about Glasgow to help you feel like a local.
Adele & Claire
NdingumGlaswegian onebhongo, ndihlala kufutshane neflethi. Le asiyondlu inenkonzo engenamphefumlo njengezinto ezininzi apha kwa-Airbnb. Mna nomfazi wam siya kuhlala sikhona ngexesha lokuhlala kwakho. Ukuba ujonge ulwazi lwasekhaya ndiyavuya ukukunceda. Ndifumaneka ngalo naliphi ixesha imibuzo okanye imibuzo
NdingumGlaswegian onebhongo, ndihlala kufutshane neflethi. Le asiyondlu inenkonzo engenamphefumlo njengezinto ezininzi apha kwa-Airbnb. Mna nomfazi wam siya kuhlala sikhona ngexesh…